जनतापाटी सोमवार, चैत्र २४, २०७६, ०६:४४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । लकडाउन अवधिमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उत्पत्ति प्रमाणपत्र विना नै भारत निर्यात गर्न सकिने भएको छ । लकडाउनका कारण उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि दुवै मुलुकको सहमतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, लकडाउन खुलेपछि निर्यात भइसकेको वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाएर भारतलाई बुझाउनुपर्ने छ ।
नेपालमा उत्पादित वस्तु भारतमा निर्यात गर्दा सम्बद्ध वस्तु नेपालमा नै बनेको भनेर प्रमाणित गर्ने काम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्दै आएको छ । तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरिने वस्तुको हकमा भने नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
आज कस्तो छ सुनको भाउ ? आइतवार, पुष २७, २०७६, १२:०६:००
झरना किन अनमोललाई ज्वाइँ बनाउन लागिपरेकी छिन् ? शनिवार, चैत्र ३०, २०७५, १४:२९:००
प्रियंकालाई कंगनाको साथ बिहिवार, भदौ ५, २०७६, २२:२४:००